”မှားပြီးမှ ပညာဖြစ်လျှင်…မမှားလို့ ဘာမှမဖြစ်သူထက် ပိုကောင်း၏” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ”မှားပြီးမှ ပညာဖြစ်လျှင်…မမှားလို့ ဘာမှမဖြစ်သူထက် ပိုကောင်း၏”	19
Posted by Thint Aye Yeik on Apr 17, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., History, My Dear Diary, Think Different | 19 comments
”မှားမှာကြောက်၍ ဘာမျှ ထ,မလုပ်ခြင်းကမှ ကြီးစွာသောအမှား”
အမှားတစ်ခုခု လုပ်မိတယ် ဆိုပါစို့။ ဒါက အမှားဆိုပေမဲ့ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်ခန်းစာပါ။
မှားရာကနေ မှန်ရာကို ရှေ့ရှု သွားဖို့ . . . လမ်းစ ရှိပါတယ်။
ဘာအမှားမှ မလုပ်မိဘူးဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ဘာမှလည်း အပြောင်းအလဲမရှိ/
ဘာအတွေ့အကြုံမှလည်း မရဘူးဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ”ညံ့တယ်”လို့ တံဆိပ်နှိပ် ခံရမယ့် ခေတ်ပါ။
ဆိုလိုတာက ”ဘာအမှားမှ မလုပ်မိတာကိုက ကြီးမားတဲ့ အမှား ကျူးလွန်တာ” လို့ စွပ်စွဲခံရမယ့် ကိန်း။
”မှားပြီးမှ ပညာဖြစ်လျှင် ဤခေတ်တွင် ညံ့၏”တဲ့။
သူကတော့. . .မမှားပဲ တန်းခနဲ မှန်ရာရောက်အောင် လုပ်နိုင်မှ ညံ့ရာမရောက်ဘူးလို့ ယူဆတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်ကလေးတော့ ထားရပါမယ်။ ထားလည်း ထားသင့်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ . . .
မှားပြီးမှ ပညာဖြစ်လျှင် ဤခေတ်တွင် သင့်တော်၏ လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ (မှားဖူးပြီးမှ အသုံးတည့်တဲ့လမ်းကို ရောက်သွားတဲ့အခါ မှားဖူးတဲ့အမှားရဲ့ ဒဏ်ကို ပြန် ခံရစရာ အကြောင်း မရှိ။ )
”မှားနေဖို့ အချိန် မရှိဘူးကွ။
ဒီခေတ်က အရွေ့တွေ အလျဉ်တွေက သိပ်မြန်နေတာ။ မှားနေရင်း ပြင်နေရင်းနဲ့ ကြာညောင်းနေရင် ပြတ်ကျန်ခဲ့မှာပေါ့” လို့ ပြောရင်တော့လည်း ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော် မငြင်းချင်ပါဘူး။
ကျနော်က ”မှားမှာကြောက်ပြီး ဘာအပြောင်းအလဲမှ ထ မလုပ်ရဲတဲ့သူ” ဖြစ်မှာပဲ စိုးရိမ်တာပါ။ ”မှားမှာ ကြောက်လို့ ဘာအပြောင်းအလဲမှ မလုပ်တာကိုက အကြီးမားဆုံး မှားယွင်းမှု” လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဆိုတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်. . .
မှားသွားသည်ဖြစ်စေ မှန်သွားသည်ဖြစ်စေ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲကို ဦးတည်ပြီး မရပ်မနား သွားပါမယ်။ ဒါက မြန်မာ့နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့မှာ ချမိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ (ဒါဟာ အယူအဆမှား ဆိုဦးတော့. . .
ဘာအယူအဆမှ ယူဆစရာ မလိုပါဘူးဆိုပြီး ဘာမှ မယူဆတာကိုက အကြီးမားဆုံး အယူအဆမှား)
မနက်ဖြန်က စပြီး ကျနော့် လုပ်ရပ်တွေ မှားချင် မှားပါလိမ့်မယ်။ ဘာမှ မမှား ဘာမှ မလုပ်သူတွေထက်တော့ တဆင့် မြင့်တယ်လို့ ခံယူပြီး ပျော်ပျော်ကြီး မှားပါမယ်။
မှားလိုက်ရင်း/ပြင်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ အမှန်သိမှုဆီ ဆိုက်ရောက်သွားပြီး . . .
မှန်ကန် ပြည့်စုံ လုံခြုံရာကို (အကြောင်းအကျိုး ညီညွတ်တဲ့အချိန်မှာ)ရောက်သွားမှာပဲလို့ . . .
ဧပြီလ ၁၇ /၂၀၁၆
ခင်ဇော် says: မှားနေလားး
မှားးခဲ့လားး လို့ မတွေးပဲ မှန်တယ်ထင်တာတွေသာ လုပ်ပါ..
အမှားး ဆိုတာ သူ့ အကြောင်း တွေးးနေရင်း လုပ်တဲ့ အရာတွေမှာ ပိုမှားးတတ်တယ်.
Thint Aye Yeik says: ဟုတ်တယ်။ မှန်တယ်ထင်ရာလေးတွေကို
မှားမှာ ကြောက်တဲ့စိတ် မပေါ်စေရဘဲ လုပ်တော့မယ်
မြစပဲရိုး says: မှားရင် ပြင်ဖို့ စိတ် ရှိနေရင်ဘဲ မှားပျော်ပါတယ် ဆက်ဆက် ရယ်။
အမှား နဲ့ ရင်း မှ (အမှား ဖြစ်မှ) ပိုပြီး ပြည့်စုံ တဲ့ အဖြေ ကို ရတာလဲ ရှိပါတယ်။
အမှား ကို အမှားမှန်းသိပြီး အဲဒါကို လက်ခံရဲပြီး ပြင်လိုက်ဖို့ သတ္တိကလဲ လူတိုင်းမှာ မရှိနိုင်လောက်ဘူး။ :-)))
Thint Aye Yeik says: ဒီသင်္ကြန်တွင်းထဲမှာ
ကျနော့်အမှားတစ်ခုကို မှားမှန်း ကောင်းကောင်း သိသွားပြီး
ဒီနေ့က စ ပြင်လိုက်နိုင်ပြီ အရီးရေ
သိလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ပြင်လိုက်နိုင်တာရယ်
(ပြင်ရတာ နည်းနည်းတော့ခက်တယ်။ အကျင့်ဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကို ဆန့်ကျင်လိုက်ရတာမို့ ခက်ခဲတယ်)
ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာ သိစိတ်က အနိုင်ယူပြီး ပြင်လိုက်နိုင်တာကို ပြန်တွေ့ရတော့
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပီတိက တော်တော် ကောင်းတာပဲ။
မိမိအမှားကို မိမိ . . .ပြင်နိုင်သူဟာ မိမိကိုယ်ကို နိုင်နင်းပဲ့ကိုင်နိုင်သူ ပဲ။
အဲ့ဒါလေးတွေ ထိုင် တွေးနေမိပြီး ဒါလေး ချ ရေးမိ
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: မှားမှန်းသိလို့ စောစောစီးစီးပြင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့
ကိုယ်တော့ မှားမှန်းမသိ မှန်မှန်းမသိ ရှေ့ဆက်တိုးရင်း မသိနွံထဲနစ်တာ ကြာလှပေါ့ :'(
Thint Aye Yeik says: ကျနော့်နားထဲမှာ စွဲနေတာကတော့….
မမှားဖူးတဲ့သူ မရှိပါဘူး…အမှားတစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မမှားဖို့ပဲ လိုတာပါ… ဆိုတဲ့
ဆရာတော် ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ) ပြောတဲ့ စကားလေး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: မှားတာကို.. မှားမှန်းသိရင်.. ပြင်ဖို့ရှေ့မှာလုပ်စရာတခုရှိသေးတယ်..
ဒီလို.. ဖွင့်ဟ၀န်ခံနည်းကို.. ဗုဒ္ဓက.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၆၀၀ ကျော်ကတည်းကပြထားတယ်..။ ၀ိနည်းချိုးဖောက်ရင်.. အာပါတ်ဖြေတယ်ဆိုတာပဲ..။
အခုအောင်မြင်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ.. (ခရစ်ယန်အများစု နိုင်ငံတွေ) က.. ခရစ်ယန်တွေ…. ကျင့်သုံးတယ်..။
Thint Aye Yeik says: ဆိုတော့…. ဘုန်းတော်ကြီးတွေမှ မဟုတ်…
သာမန် အရပ်သားတွေလည်း… အဲ့ဒါမျိုးလေး လုပ်သင့်တယ် ဆိုပါတော့ …
kai says: မြန်မာတွေ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်ဆို.. လုပ်သင့်တယ်…။
အောက်က ရဟန်းတွေအာပတ်ဖြေဟန်ကို.. လူအချင်းချင်းပြောဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ကြည့်ပေါ့..။
Ma Ma says: (မှားလိုက်ရင်း/ပြင်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲ
အမှန်သိမှုဆီ ဆိုက်ရောက်သွားပြီး . . .
manawphyulay says: မှားလား မှန်လား မဝေခွဲငြား
ချစ်စရာ့သမီးလေး တစ်ယောက် လူလောကထဲ ရောက်ခဲ့ပြီ….. :P
Thint Aye Yeik says: အဲ့ဒါလေးက အမြတ် အမြတ်
ရတုန်း ယူထား အစ်မရေ။
uncle gyi says: အမှားကိုအမှားမှန်းသိဖို့
သိရင်ချက်ချင်းပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
Thint Aye Yeik says: ဟုတ်တယ်နော်။
မှားတာကို မပြင်နိုင်တာကမှအပြစ် တဲ့။
အောင် မိုးသူ says: အမှားက အမှန်
Thint Aye Yeik says: ဘာမှားနေသလဲ လို့.. သူများကို မေးရင်..အဲ့ဒါကိုက အမှား အမှန်က ကိုယ် ဘယ်နေရာတွေမှာ မှားပြီး ဘယ်နေရာတွေမှာ မှန်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သိရမှာနော့်။
ဘားးးမုန့်ဝူး…ကွကိုယ် ပြန် ဆုံးမတာနော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Foolish Girl says: မှားတယ် မှန်တယ်ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ရူထောင့်ပေါ်မူတည်တယ်။
လက်ဖမိုးဘက်ကကြည့်နေတဲ့သူ က လက်ဖ၀ါးဘက်မှာရှိနေတဲ့သူကို ဒါလက်ဖမိုးလက်ခံလိုက် ငါအမှန်လို့ အတင်းပြောလို့မရဘူး
နှစ်ဖက်စလုံးကသူ့အမြင်ကိုယ့်အမြင်ဝင်ပြီးခံစားကြည့် အဲလိုဆိုရင် နှစ်ဖက်ကြားကကွာဟတာကို နှစ်ဖက်စလုံးသိရင် နှစ်ဖက်စလုံးကမှန်ရာကိုဦးတည်သွားမှာပါ။
Thint Aye Yeik says: လက်ဖဝါး လက်ဖမိုး အယူအဆကလည်း ပစ်ပယ်ထားလို့ မရ ရေးချ မရ